Man United oo guul ay u qalantay ka gaartay kooxda Burnley oo marti ugu ahayd garoonka Old Trafford… +SAWIRRO – Gool FM
Man United oo guul ay u qalantay ka gaartay kooxda Burnley oo marti ugu ahayd garoonka Old Trafford… +SAWIRRO
Dajiye December 30, 2021
(Manchester) 30 Dis 2021. Manchester United ayaa guul ay u qalantay ka gaartay kooxda Burnley oo marti ugu ahayd garoonka Old Trafford, kaddib markii ay kaga adkaatay 3-1, ciyaar qeyb ka ahayd kulammada toddobaadkan ee horyaalka Premier League.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 3-1 ay ku hoggaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Manchester United.
Daqiiqadii 8-aad Manchester United ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 1-0 ka dhigay McTominay, waxaana goolkan ka caawiyay Cristiano Ronaldo.
27 daqiiqo marka ay dheesha mareysay Manchester United ayaa dhalisay goolkeeda labaad kaddib markii uu gool iska dhaliyay Ben Mee, waxayna ciyaarta sidaas ku noqotay 2-0 ay ku hoggaamineysay United-ka.
Cristiano Ronaldo ayaa daqiiqadii 35-aad wuxuu ciyaarta ka dhigay 3-0 ay ku hoggaamineysay kooxda Manchester United.
Laakiin 38 daqiiqo marka ay ciyaarta sii mareysay kooxda Burnley ayaa la timid gool, kaddib markii uu 3-1 ka dhigay dheesha laacibkooda Aaron Lennon.
Balse ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhammaatay 3-1 ay kaga adkaatay Manchester United, kooxda Burnley oo marti ugu ahayd garoonka Old Trafford, Red Devils ayaa soo gashay booska 6-aad ee kala sarreynta horyaalka Premier League, waxayna leedahay 31 dhibcood.
“Waxaan muujinay awooda kooxdeena.” – Ralf Rangnick kaddib guushii Man United ay ka gaartay Burnley